Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar Loogu Magac Darray *Kulankii Soomaali Waa Mid* ooy Jaaliyada Seattle Soo Qabanqaabisay.
Siminaar Loogu Magac Darray *Kulankii Soomaali Waa Mid* ooy Jaaliyada Seattle Soo Qabanqaabisay.
Posted by ONA Admin	/ April 26, 2015
Seattle, WA: Maalintii Sabtida ee 25ka bisha April waxaa magaalada Seattle ee gobolka Washington kaqabsoomay Seminaar loogu magac daray “Kulankii Soomaali Waa Mid” ooy soo qaban qaabiyeen Jaaliyadda Somalida Ogadenya ee Seattle iyo Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU. Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulsha waynta Soomaaliyeed ee kudhaqan magaalada Seattle iyo nawaaxigeeda, sida ururada dhalinyarada, hooyooyinka iyo culimo awdiinka.
Seminaarkan ayaa waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka kadibna waxaa khudbado kala duwan kasoo jeediyey qaar kamid ah madaxda iyo xubnaha jaaliyadda sida guddoomiyaha Jaaliyadda Mudane Cali Maxamed Axmed (Cali Yare) oo isagu ka hadlay baahida keentay in la aas’aaso ururka ONLF iyo waliba waxay maanta u dagaalameyso, taasoo ah aaya katashiga shacabka Soomaalida Ogadenia.
Waxaa isna cashir halkaa kajeediyey guddoomiyihii hore ee jaaliyadda Mudane Cabdullahi Daahir oo isagu ka hadlay khayraadka dhulka Ogadenia uu qaniga kuyahay, balse nasiib darro uu shacabku maanta ka gaajeysan yahay gumeysi Itoobiya ee dhibaatooyinka ba’an kuhaya shacabka Somalida Ogadenya awgii. Waxaa isna cashir taariikhi ah halkaa kasoo jeediyey Mudane Cabdiqaadir Cismaan Maxamed (Fanax) oo isagu ka hadlay loolanka siyaasadeed ee geeska Africa, gaar ahaan tan udhaxeysa shucuubta Soomaaliyeed iyo gumeysiga Ethiopia.
Dhanka kale madaxda Hogaanka Abaabulka iyo Arrimaha Ururka (HAAU) Mudane Cabdiraxiim sheikh iyo Mudane Jabarti Ismaaciil ayaa iyaguna kahadlay saamaynta ay shacabka dibada kudhaqan sida dhalinyaradu kuyeesheen kor uqaadidda halganka Somalida Ogadenia.
Ugu dambeyntii qaar kamid ah dhalinyarada yar yar ee OYSU ayaa halkaa kusoo bandhigay sawiro ka turjumayay jidh-dilka iyo xasuuqa ay ciidamada gumeysiga Itoobiya ugeysteen shacabka biri-magaydada ah ee Ogadenya kudhaqan sida caruurta, haweenka iyo dadka waayeelka ah. Siminaarka ayaa runtii ahaa mid saamayn weyn kuyeeshay bulshadii kasoo qayb-qashay isla markaana ku dhamaaday guul iyo jawi aad uwanaagsan oo farxad galiyay Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Seattle, WA.
Xafiiska Warfaafinta Jaaliyadda Seattle